Mpanamboatra sy mpanamboatra rafi-pampianarana MRI tsara indrindra. CSJ
Ny sehatra NMR / MRITEP dia mandray ny rafitra spectrometer arahin'antoka. Tsy manome làlana marobe amin'ny fanandramana fotsiny ihany, fa koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny rindrambaiko, ny mpampiasa dia afaka mampiditra seha-pivoarana vaovao amin'ny rafitry ny sary araka ny filan'izy ireo ao anatin'ireo toe-javatra misy ifandraisany. misokatra, ary ny mpikaroka dia afaka mamorona fizarana tsy miankina ary mamolavola taranja fanandramana vaovao arakaraka ny filan'ny fikarohana.
NMR / MRITERP （Fampianarana, fanandramana ary sehatry ny fikarohana） dia rafitra MRI birao kely natao ho an'ny fanandramana amin'ny teknolojia MRI. Izy io dia misy rafitra MRI birao kely, sehatra rindrambaiko MR ary sehatra fampiroboroboana ny filaharana, miorina amin'ny famolavolana rindrambaiko sy rindrambaiko misokatra tanteraka. Izy io dia afaka manatanteraka ny fitsipiky ny MRI sy ny lalam-panandramana teknolojia MRI ho an'ny lehibe mifandraika amin'ny fizika (toy ny fizika maoderina, fizika ampiharina, fizika radio, injeniera momba ny elektronika sns.) sns.) fampiasana fanandramana. Izy io dia azo ampiasaina ho sehatra fampandrosoana sy fanandramana ho an'ireo mpamorona singa MRI, ary ampiasaina ho toy ny sehatra fitsapana ho an'ireo mpamorona amplifier gradient, amplifier amin'ny radio ary spectrometre.
(1) Karazana andriamby: Magnetra maharitra
(2) tanjaky ny andriamby ： 0.12T / 0.3T
(3) Hatanjaka an-tsaha gradient:> 15mT / m
(4) Famaritana tsy mitongilana: <5%
(5) Famahana ny habaka: <1mm;
(6) Volavola famoretana Eddy ankehitriny
(7) Domain domain NMR
(8) Manome fanaingoana manokana
Teo aloha: Extremeity MRI
Manaraka: Homogeneity avo lenta sy fitoniana Benchtop NMR